30 July; Wadahadalada Makka iyo xalka siyaasada Soomaaliya
Wadahadalada la filayo in ay dhamaadka bishan July 30-keeda ku dhexmaraan magaalada barakeysan ee Makka, Isbaheysiga Dib uxoreynta Soomaaliya iyo DKGka, ayaa lafilayaa in ay albaabada u furaan xal siyaasadeed, islamarkaana dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya oo dhamina muujiyaan laazimitaankooda hirgalinta wixii lagu saxiixay shirkii Dijibuuti iyo kan Makka. Sidaa darted qormadan kooban waxaan ku falanqeyn doonaa, UN-ka iyo waajibka kasaaran sidii ay dhinacooda wixii ay balanqaadeen u hirgalin lahaayeen, Isbaheysiga oo iyaguna laga dhowrayo sidii imtixaanka adag ee horyaala ugu guuleysan lahaayeen iyo DKG/Ethiopia oo iyaguna laga sugayo dhowrista meel marinta dhinacooda wixii ay ogolaadeen.
UN iyo waxa Soomaalidu ka dhowreyso
Heshiiskii Dijibuuti wuxuu ka dhignaa bilow fiican iyo niyad wanaag loogu googol xaadhayay heshiika kama dambeysta ah ee 30ka bishan ka dhaci doona Makka. Heshiiskan ayaa sida muuqata noqondoona, midka lagu kala ogaandoono, awooda UN ay u leedahay hirgalintiisa. Aragtiyo wey jiraan odhanaya UN waxey katarjuntaa rabitaanka quwadaha waaweyn ee caalamka kajira sida Mareykanka iyo Midowga Yurub. Balse si kastoy tahayba, markan imtixaan culus ayaa horyaal, oo Soomaalida oo dhami wada eegayaan awooda ay UN uleedahay hirgalinta wixii ay balan qaadeen oo ah;
Keenista ciidamo badala kuwa Ethiopia
Hubinta bixitaanka Ethiopia ee dalka Soomaliya ay kaga baxeyso
Fududeynta xalka siyaasada iyo meelmarintiisas
Gargaar u fidinta shacabka ku tabaaleysan dalka gudihiisa
Isbaheysiga waxyaabaha laga dhowrayo
Sida aanu lawada soconno, Isbaheysiga intii shirkia Dijibuuti saxiixday waxaa laga dhowrayaa, in ay laazimaan wixii ay balan qaadeen. Runtii waxaan isleeyahay 30 ka July bishan aynu ku jirno waa xilligii lakala ogaan lahaa awooda ay Sheekh Shariif iyo garabkiisu ku leeyihiin muqaawamada lagula jiro DKG/Ethiopia. Ragga u dhuun daloola bilowgii dhismihii Midowga Maxaamkunta Islaamku waxey tilmaamaan, in Sheekh Shariif uu isbaheysigaas ku lahaa awooda 90%, halaka 10% soo hadhayna ay lahaayeen Sheekh Xassan Daahir iyo Al-shabaabka.
Hadaba hadii boqolkiiba 90-ka ay Sheekh Shariif dhankiisu xabad joojinta laazimaan, waa lahubaa in culeyska garabkaasi uu yahay mid dhab ah oo aan la dhayalsan Karin, xabad joojintuna sidaas ay ku meemari doontaa. Hadii boqokiiba 10-ka soo hadhay ay xabadda siiwadaan, garabka heshiiska ogoli sidii ay heshiiska ku galeen waa in ay dhaleeceynta ku muujiyaan diidmadooda cunfiga socda.
DMG/Ethiopia maxaa laga filayaa?
DKG/Ethiopia waxaa laga filayaa in ay dhowraan xabad joojinta, islamarkaana fududeeyaan howlaha gargaarka iyo isu socodaka dadweynaha. DKGka waxyaabaha laga dhowrayo waxaa ugu muhiinsan in ay ka tanaazusho inku dhajinta ay ciidamada Ethiopianka kusii dhiiri galinayaa in ay wadanka sii joogaan, iyagoo cabsi kamuujinaya in jiritaankoodu khatar galayo hadii ay Ethiopianku baxaan.
Cabsidani waa mid dhab ah, inkastoo lagayaabo, in soo shaac bixitaankeedu wakhti gaaban qaato, hadana wadanka Ciraaq wayba ka dhacday. Mareykanku isagoo ciidamadiisu xoog ku heystaan Ciraaq, dowlada Ciraaqqna ku waardiyeeya goobta cagaaran, ayuu haddan la sixiixanayaa baarlamaanka Ciraaq in ay heshiis amni iyo mid military layeeshaan. Sidaas si lamid ah ayey Ethiopia iyadoo kaashaneysa DKG ayey dooneysaa in ay heshiis kula gasho in ay wadanka sii joogi karto, xitaa hadii UN ciidamo kale oo Africa ah keento.
Furmida albaabka xalka siyaasada Soomaalida
Xabad joojintu waxey sidoo kale albaabda u furi doontaa xal siyaasadeed oo laga gaadho arinta murugsan ee siyaasada Soomaaliya ay xilligan mareyso. Waxyaabaha miiska wadahadaladda saaran waxaa ka mid ah sedex xal siyaasadeed oo kala duwan, wexeyna kala yihiin;
In ladhiso dowlad �Technocrats� dhexdhaxaad ah, oo ku meelgaadh ah, islamarkaana dhamestirta sannad iyo 3da bilood ee ka dhiman xilliga u dhiman DKG oo ah bisha 9/Oktobar/2009
In awood qeybsi lasameeyo, oo Isbaheysiga lasiiyo qeyb kuraasta baalamaanka iyo wasiirada dowlada
In Isbaheysigu iyagoo dibada ka jooga dowlada ay xisbi mucaarad ah doorasho u soo istaagaan, cidii ku guuleysatana ay dalka u taliso.
Hadii hal xal aan sanka la�iska galineyn, waxaa haboon in ummadda lakala dooransiiyoo dhowr mashruuc, halkii hal nooc oo xal loo arko dusha lagaga keeni lahaa. Mathalan awood qeybsigu ma ogaalanayo in shacabka Soomaaliyeed kala doortaan labo mashruuc midkii ay ku qanacsan yihiin. Marka isku milanka awood qeybsigu xal ma�aha, sidaa darteed kaa isaga ah meesha kasaar. Hase ahaatee cabsi waxaa jirta ah, in bulshada caalamku ay doorbideyso qodobka labaad ee ah awoof qeybsiga.
Waxaanse isleeyahay, hadii laqaato qodobka 1 iyo 3, in labaduba ay yihiin labo qodob oo wanaagsan, ummadda Soomaaliyeedna u ogolaanaya in ay labo dariiq mid doortaan, oo ah;
Siyaasada la qabyaaladeeyay, ee dalka kala googoysay, dadka Soomaalida ahna kala irdheysay
Iyo Mashruuca wadinayada iyo akhlaakhda Islaamka, midnimada, horumarka, cadaalada iyo dhowrista xaqa iyo sharafta ruuxa Soomaaliga ah ju saleysan.
Hadii aan umadda laka dooransiin laba shey, isla markaana la�ogaan kan ay rabaan, wixii laga sheegaayi waa wax aan waxba ka jirin. Wadadaas ayaana ah midda lagu kala ogaanayo, in shacabka Soomaaliyeed uu yahay bulsho sida bulshooyinka caalamka oo kale ku naaloonaya in ay sinnaan iyo cadaalad helaan, ama in ay yihiin bulsho qabyaalad dilootay oo jaahli ragaadiyay, jecelna kii dilaya in ay warmaha u dhiibato!
Hashiiska 30ka bisha Makka ka dhici doona wuxuu imtixaan lagukala ogaandoono cida ku dhacda iyo cidda ka gudubtaba u yahay dhamaan qeybaha ku lug leh. Mana noqondoonto wax qarsooma cidda ku fashilma in ay fulin weydo wixii ay balanqaaday. Marar hore wey jirtay, in hadii cidi ka gaabiso dhinaceeda ay dhinacyada kale eedda waxkasaarto, balse hadda dhibta baaxadeeda ayaa keentay, I indhaha ummadda oo dhami wada hayaan dhamaan qeybaha oo idil. Si dhankii fashalku kayimaado mas�uuliyadiisa bani aadanimao iyo middiisa qaanuun loogula xisaabtamo mustaqbalka.
Qore Nuradiin Askar Ibrahim